"Jersey" ụdị ụmụ ehi 👍: akụkọ ihe mere eme, nkọwa, njirimara, ọrịa na foto, ndị nwere ọkara ezì - Ugbo - 2019
Ngalaba ehi nke Jersey, nke a maara nke ọma n'ụwa, bụ nrọ nke onye ala nkịtị nke otu ìgwè dị mma ma dị mma.
Ihe nwere ike ime ka ọ bụrụ na ọbụna na ọnọdụ ọjọọ nke Russia nwere ike ịghọ otu n'ime ụdị anụ ụlọ abụba kachasị abụba n'ụwa.
Jersey ụdị nkọwa
Ihe nwere ike ibute ọrịa
Ụdị ochie a apụtawo na Bekee Nnukwu Jersey n'Ịntanetonye nyere ya aha. O sitere na ntanye nke anu ulo nke Briten na Norman, ma ama ama ya site na ebe ndi ohia mara mma nke agwaetiti na nchedo Bekee.
Mbụ a kpọtụrụ ehi ndị a na-ezo aka 1789mgbe gọọmentị nke England iji zere ịdị ọcha nke ụdị nke ahụ amachibido ịbịara ụmụ ehi ọ bụla na Jersey.
More rue 1866mgbe a na-edepụta akwụkwọ ọmụmụ, a na-ahụ ehi ndị Jersey dị iche iche dị iche iche na mmiri ara ehi na mba ndị ọzọ.
Na mmalite nke narị afọ XIX ha na-amalite na a ga-ebute ha na Europe, America, Australia, na Africa. Na njedebe nke otu narị afọ ahụ, ndị mbụ a na-azụlite pụtara na Russia. Ugbua n'oge USSR, ndị okenye Jersey so na nhọrọ nke ehi na-acha ọcha na Siber.
Nchịkọta nke mmiri ara ehi kpebiri ọdịdị nke ụdị ahụ, yana obere obere ya.
Karịsịa, elu nke oke ehi ehi Jersey bụ 121-123 cm. Ihe ngosi anụmanụ bụ isi ihu ala, obere okpokoro isi na oghere anya nke ọma.
Anumanu nke umu a nwere okpukpu obi miri emi, nke di ala elongated olu na elu (mgbe ufodu aka) we kpọnwua. Ụdọ nke "Jersey" na-edozi ya, na ogologo loin na-aba n'ime azụ.
Ụdị kachasị nke anụ ahụ bụ ọbara ọbara ma ọ bụ agba aja aja. Ma ojiji ndị gbara ọchịchịrị nwere ike ime, mgbe ụfọdụ, e nwere ndị nwere akara ọcha (ọtụtụ mgbe na ala nke ahụ na na nsọtụ). Ọtụtụ mgbe, ehi nwere isi gbara ọkpụrụkpụ, aka na olu, na mgbe mgbe, ọ na-enwe ọkpụkpụ na-acha ogologo oge n'azụ.
Ná nkezi, ehi na-eru kilogram 400, ehi - ruo 700 kilo.
Azụ Jersey na-azụkarị n'ihi àgwà ọma nke mmiri ara ehi ya.
E nwekwara ụdị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ, dị ka: Simmental, Aishir, Yaroslavl, Kholmogory.
Ihe ndị bụ isi ya gụnyere:
Ahịa Jersey na-enye mmiri ara ehi dị elu. Site na nri zuru oke na nlekọta kwesịrị ekwesị, ndị na-eto eto kwa ụbọchị na-enye ihe ruru lita 16 nke mmiri ara ehi, na ndị okenye - ruo lita 32 nke mmiri ara (ruo 4,000 lita ma ọ bụ karịa kwa afọ) na uto dị mma na oke abụba - ruo pasent 6 ma ọ bụ karịa. . Ọtụtụ mgbe, n'oge na-adịghị anya mgbe mịkọsịrị, otu ude mmiri na-adọrọ mmasị dị n'elu mmiri ara ehi;
Ụdị a na-ahụ anya site n'inwe ntachi obi, nke n'ozuzu na-emetụta ahụ ike ya. Ehi na ehi na - agba ọsọ na - atachi obi na nsogbu nsogbu ihu igwe na - enweghị nsogbu ọ bụla - oke mmiri dị elu, ikuku oyi na - atụ oyi, okpomọkụ;
Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ na-ekwu na ehi a adịghị mma na ọdịnaya. Ọ dịghị mkpa nri dị ukwuu, ọ naghị ewe ọtụtụ ohere, ọ gaghị esiri ya ike ilekọta ya;
Nke a na-emepụta nke a na-eji àgwà anụ ahụ mediocre.
Foto "Jersey" ehi ehi:
Dị ka e kwuworo, maka nlekọta anụzi nke ụmụ anụmanụ enweghị ọnọdụ griinụ pụrụ iche achọrọ. Ehi na Jersey na enwe mmetụta nke ukwuu na ebe ọ bụla ebe ịta nri ahịhịa. N'eziokwu, anyị ga-eburu n'obi na na-eri nri, ehi ndị a nwere ike igosi egwu.
Mgbe a nọgidere na-arụ ọrụ ugbo, ọ ga-ezuru ma ọ bụrụ na a na-edebe ụmụ anụmanụ na ụlọ dị ọcha, nke ọma, ma na-enweghị ezigbo nkọwa na akwa akwa akwa ahịhịa.
Maka nri, na "Jersey" a gosipụtara onwe ha dị ka ndị na-eri nri. N'ọnọdụ ọ bụla, dị ka ọtụtụ ndị pastoralists kwuru, ụmụ anụmanụ nke ụdị a na-eri na nkezi 20-25% obere nri karịa ndị nnọchiteanya nke ndị ọzọ mmiri ara ehi ụdị.
Sena enwere ike inye otutu ehi a - anu ehi nke Jersey ga eri ihe dika odi mkpa maka ndu ndu. Ma, ị kwesịrị inye mmiri ihe karịrị 3 lita kwa ụbọchị, ọbụna ma ọ bụrụ na anụmanụ na-achọsi ike na swill. Karịsịa ịṅụ mmanya na-egbochi ụmụ ehi ndị nwere ike ịṅụ mmiri dị ukwuu ka ha merụọ.
Na-elekwasị anya na ndepụta nri, ị gaghị eleghara ihe oriri anya n'ụdị brik nnu bara uru. Ọ bara uru (karịsịa maka ndị na-eto eto) ka ha na-etinye ụrọ nke ụrọ uhie n'oge feeder.
N'ezie nlekọta kwesịrị ekwesị n'ihi na ụmụ anụmanụ dị iche iche, nakwa maka ehi nke ụdị ndị ọzọ, gụnyere nhichapụ ebe ọ bụla na-ehi ụra, yana ịkọcha ihe na-eme ka a na-amị ya.
Ụdị a na-ezo aka na-eto eto n'oge mbụ - akpa calving ehi na-eto eto nwere ike ime mgbe ha dị afọ 2-3.
E kwesiri ka ewepu ehi ndi Jersey site na nnukwu ulo oru mmeputa ihe, ebe ndi ozo noo na ihe.
A mụrụ ụmụ ehi n'ụzọ dị mfe, na-enweghị ntinye pụrụ iche nke onye na-agwọ ọrịa.
A ghaghị iburu n'obi na n'ihi ihe ndị metụtara okpukpu ahụ, ụmụ anụ ndị a mụrụ na ụmụ ehi ndị na-adighi ike. Mgbe amuchara ha mkpa nlekọta anya.
Karịsịa, ọ bụrụ na ehi ahụ egbughi nwa amụrụ ọhụrụ ozugbo amuchara ya, a ghaghị kacha ya na ahịhịa. Ọnwa nke mbụ nke nwa ọhụrụ ga-edebe ya n'ime ụlọ na-adịghị ekpo ọkụ.
A ghaghị iburu n'uche na n'ime ụbọchị ole na ole mbụ, ụmụaka a mụrụ ọhụrụ nwere ike iri nanị mmiri ara nne. Otu ọnwa mgbe a mụsịrị nwa, a na-etinye obere akụkụ nke akwụkwọ nri dị ọcha na nri ha. N'ebe ịta nri nkịtị ụmụ anụmanụ na-eto eto nwere ike ịtọhapụ ọnwa abụọ mgbe amuchara nwa.
N'ihe dị mkpa, ụdị ndị Jersey, ọ bụrụ na e nyere ya nri kwesịrị ekwesị na nlekọta, nwere oke mgbapụta zuru oke megide ọrịa. Ebube dị ala na akụkụ aka dị iche iche nke usoro a kapịrị ọnụ na-echebe ụmụ ehi ndị a site n'ọrịa ụkwụ ndị ọzọ na-ata ahụhụ.
Otú ọ dị, n'okpuru ọnọdụ ọjọọ nke ụlọ na mgbe ha na ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa na-akpakọrịta, ha nwere ike ịda ọrịa na anụ ndị ọzọ na-arịa ọrịa.
... Iji kpochapụ ihe ijuanya niile na-eto eto ma mee ka anụmanụ ahụ dị mma ma na-arụpụta nke ọma, onye ọrụ ubi ga-agbaso iwu niile nke nlekọta na nri.
Ụzọ a ga - emetụta ọ bụghị nanị mmiri ara ehi, kamakwa ime ka usoro ahụ dum dị jụụ ma dị ụtọ.
Ọgwụ ọgwụ na ngwa nke dope-herb
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ezigbo ngosipụta nke nrọ ndị ọrụ ugbo - ehi ehi Jersey